सल्यानमा कोरोना संक्रमित घटेसँगै जिल्लामा रहेका आइसोलेसनहरु खाली हुदैँ « Salyan Today
सल्यानमा कोरोना संक्रमित घटेसँगै जिल्लामा रहेका आइसोलेसनहरु खाली हुदैँ
सल्यान २८, जेठ ।
सल्यानमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या घट्दै गएको छ । जिल्लाका दश वटै स्थानिय तहको अवस्थालाई हेर्दा पछिल्लो साता जिल्लामा कोरोना संक्रमितदर र मुत्युदर घटेको स्वास्थ्य सेवा कार्यालय सल्यानले जनाएको छ । विगतमा दैनिक एक सय बढी कोरोना संक्रमित थपिने गर्दथेँ तर अहिले नयाँ संक्रमित हुने भन्दा डिस्चार्ज हुनेको संख्या बढ्दै गएको छ । जिल्लामा संक्रमितको संख्या घट्दै गएपछि जिल्लामा निर्माण गरिएका आइसोलेसन समेत खाली हुदैँ गएका छन् ।
जिल्ला अस्पताल सल्यानका डा. भिमकान्त जैसीले अस्पतालमा निर्माण भएका आइसोलेसन बेडहरु बिस्तारै खाली हुदैँ गएको बताउनुभयो । ‘जिल्ला अस्पतालमा १६ वेडको आइसोलेसन हो, कोरोना संक्रमितको चाप बढेपछि आकस्मिक कक्षलाई समेत प्रयोग गरेर ३६ वेडको आइसोलेसन बनाएर कोरोना संक्रमितको उपचार गरिएको थियो’ उहाँले भन्नुभयो ‘अहिले १६ बेडको आइसोलेसनमा पनि ११ जना मात्रै संक्रमित रहेका छन् ।’
उहाँले जिल्ला अस्पताल परिसरमा शारदा नगरपालिका र सवुज गण सिमखर्कको सहकार्यमा निर्माण भएको २५ वेडको आइसोलेसन प्रयोगमा नआएको बताउनुभयो । ‘कोरोना संक्रमितलाई उपचारको लागि निर्माण गरिएको हो, अहिले संक्रमित घटेकाले यो भवनको प्रयोग भएको छैन्, यदी फेरी संक्रमित बढ्नथाले भने प्रयोगमा ल्याउछौँ’ उहाँले भन्नुभयो । डा. जैसीले कोरोना संक्रमितको लागि आबश्यक पर्ने अक्सिजनको अहिले अभाव नभएको जानकारी दिनुभयो ।
बागचौर नगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखा प्रमुख हरि बहादुर कठायतले नगरमा अहिले कोरोना संक्रतिको संख्या घट्दै गएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले विगतमा जस्तै रुघाखोकी र ज्वरोका बिरामीहरु समेत कम भएको बताउनुभयो । नगरपालिकाले बागचौरमा २५ वेडको आइसोलेसन निर्माण गरेको छ । कोरोना संक्रमित घट्दै गएकाले आइसोलेसनका आधा बेड खाली रहेको उहाँको भनाई छ ।
जिल्लाका अरु स्थानिय तहमा निर्माण गरिएको आइसोलेसन पनि खाली हुदैँ गएका छन् । स्वास्थ्य सेवा कार्यालय सल्यानका सुचना अधिकारी थलराज डिसीका अनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा जिल्लाभर ५० जनाले कोरोना भाइरसलाई जितेर डिस्चार्ज भएका छन् । यससँगै बैशाख यता जिल्लामा कोरोनालाई जितेर डिस्चार्ज हुनेको संख्या १ हजार ५ सय १८ पुगेको छ भने हालसम्म कोरोनालाई जितेर डिस्चार्ज हुनेको संख्या २ हजार २ सय ७२ पुगेको छ ।
जिल्लामा हालसम्म कोरोनाका संक्रिय संक्रमितको संख्या ३ सय ८१ मा झरेको छ । जसमा जिल्ला अस्पताल सल्यानमा ११ जना, संस्थागत आइसोलेसनमा २९ जना र होमआइसोलेसनमा ३ सय ४१ जना रहेका छन् । जिल्लामा हालसम्म कोरोनाबाट ५० जनाको मृत्यु भएको छ ।